Oge Mesozoic: ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe ọ hụsịrị ihe niile metụtara ya Precambrian eon, anyị na-aga n'ihu n'oge iji gaa onye Mesozoic. Gbaso ụkpụrụ nduzi nke geological oge, Mesozoic bụ oge a maara dị ka afọ nke dinosaurs. Ọ mejupụtara oge atọ akpọrọ Triassic, Jurassic na Cretaceous. N'oge a, ọtụtụ ihe mere na ụwa anyị nke anyị ga-ahụ n'ụzọ zuru ezu na post a.
You chọrọ ịma ihe niile mere na Mesozoic? Naanị ị ga-anọgide na-agụ ihe.
2 Ihe nākpu akpu na dinosaurs
3 Oge Triassic
4 Oge Jurassic
5 Oge Cretaceous
Mesozoic mere n'etiti ihe dị ka 245 nde afọ wee dịgide ruo 65 nde afọ gara aga. Oge a dị ihe dị ka nde afọ 180. N'ime oge a, vertebrates mepụtara, gbasasịa ma merie ebe niile n'ụwa.
N'ihi mmepe nke uche ise, ọhụụ ọhụrụ nke mmalite nke ihe malitere imepụta ihe ọhụrụ. Na nke a na-amalite mmalite nke akụkụ ahụ dị ka nnukwu usoro mmalite. Bụrụ bụ akụkụ ahụ nke na-enye mmepe kachasị na akụkọ ntolite.
Nuklia nke mkpụrụ ndụ na-aghọ ebe etiti njikọ na nnata nke ozi niile. Ọ na-atụle ụbụrụ nke mkpụrụ ndụ, ma ọ na-amalite ikwu banyere ụbụrụ na azụ. N'oge a usoro okike nke amphibians, ihe na-akpụ akpụ, nnụnụ na anụmanụ na-ewere ọnọdụ nke ụbụrụ na-etolite ma na-azụkwa ihe ọmụma ka ukwuu.
N'oge a, kọntinent na agwaetiti ndị gbakọtara na Pangea na-amalite iji nwayọọ nwayọọ na-adị ugbu a. Nnukwu mmegharị ororogen adịghị eme na ihu igwe na-adịkarị mma, na-ekpo ọkụ ma na iru mmiri. Nke a bụ ihe kpatara na ihe nākpu akpu rutere elu pụrụ iche nke dinosaurs. Ogo nke anụmanụ ndị a buru ibu ma, n'ihi oke ụba ha, a na-akpọkwa Mesozoic dị ka Age of Reptiles.
Ihe nākpu akpu na dinosaurs
Repfọdụ anụ na-akpụ akpụ mụtara ife efe. A ghaghi ikwu ya na, dika n'oge nile na oge nile, otutu mmadu anoghi anwu dika trilobites, graptolites na azụ azụ.
N’aka nke ọzọ, e weghachiri flora na fauna ohuru. Gymnosperms pụtara (osisi vaskụl na-etolite mkpụrụ ma enweghị okooko osisi). Osisi ndị a gbanwere ferns. Na ngwụcha nke afọ, osisi akpọrọ angiosperms pụtara. Ha bụ osisi ndị kachasị nwee usoro nwere ovary na mkpụrụ dị n'ime ya. Na mgbakwunye, ha nwere okooko osisi na mkpụrụ osisi.
Nnukwu nnukwute mgbanwe evolushọn a nwere mmetụta dị ukwuu na ndụ anụmanụ, ebe osisi bụ isi ihe na-enye ọtụtụ n'ime ha nri na ibi ndụ. angiosperms bụkwa ihe na-eme ka ụmụ mmadụ nwee nsogbu, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ihe ọkụkụ gburugburu ụwa sitere na ha.
Ndi buru ibu anụ ndị na-akpụ akpụ ma ọ bụ ndị a na-akpọkwa dinosaurs na-achịkwa ụwa na ikuku ruo ọtụtụ nde afọ. Ha bụ anụmanụ ndị kachasị mepere emepe. Njedebe ya bịara na njedebe ikpeazụ nke Mesozoic. N'oge oke mkpochapụ a, nnukwu ìgwè nke invertebrates furu efu.
Dịka anyị kwurula na mbụ, e kewara oge Mesozoic na oge atọ: Triassic, Jurassic na Cretaceous. Ka anyị hụ nke ọ bụla n'ime ha n'ụzọ zuru ezu.
Were ebe dị 245 ka 213 nde afọ. N’oge a amụrụ amọnụ mbụ. Dinosaurs na-apụta ma na-agbasa. Ihe dịka 230 nde afọ gara aga, eriri anụ ahụ na-akpụ akpụ nwere ike imeghari maka agbụrụ kachasị ọsọ. Na mgbakwunye, ihe dịka 205 nde afọ gara aga, pterosaurs mbụ (anụ na-akpụ akpụ na-efe efe) pụtara.
Triassic bu akara nke mbu ezi mammals na nnunu mbu. Nnụnnụ sitere na anụ dinosaurs na-eri anụ, ọkụ ọkụ. Dinosaurs nwere ike ịmalite ikuku ma merie ikuku ikuku. Maka nke a, ndị isi jiri nwayọ gbanye nku ka ha nwee ike ịgba ọsọ ma ndị nke na-aga ije wee dị gịrị na mkpa.
N'aka nke ọzọ, ábụ́bà ya na-echebe ya na nke na-enweghị mmiri kpuchie ahụ́ ya ma jiri nke nta nke nta belata ma dịkwuo mfe. Anụ ahụ ya niile na-emegharị ụgbọ elu ogologo ma ọ bụ na-erughị ogologo.
A bịa n'ala ahụ, osisi ndị kasị baa ụba na-adị mgbe ọ bụla, ọtụtụ n'ime conifers na ginkgos. Dịka anyị kwurula na mbụ, n'oge Triassic, Pangea kewara abụọ na-achị Laurasia na Gondwana.
Oge Jurassic mere ihe dịka 213 ka 144 nde afọ. Dịka ị pụrụ ịhụ na fim, nke a bụ oge ọla edo nke dinosaurs. Nke a bụ n'ihi ihu igwe dị ọkụ ma na-ekpo mmiri ma na-akwado uto ya. Ekelekwara uto nke ahịhịa ndụ na-eto eto na mmụba ya.
Ka kọntinent ndị ahụ kewara, oké osimiri ahụ toro ma jikọta ọnụ, ebe mmiri na-emighị emi ma na-ekpo ọkụ gbasaa na Europe na ala ndị ọzọ. Ka ọ na-erule ngwụsị nke Jurassic, oké osimiri ndị a malitere ịkpọ nkụ, na-ahapụrụ nnukwu akụ́ mmiri okwute nke si n'oké osimiri na coral ndị dị n'okirikiri mmiri.
Ala nke dinosaurs na-achịkwa akụkụ ya, ebe ọnụ ọgụgụ mmiri ndị dinosaurs na-abawanye dị ka ichthyosaurs na plesiosaurs. Dịka anyị kwuburu, dinosaurs nwere ike ịgbasa n'ụzọ atọ niile. Anụmanụ na-adị obere n'oge a niile. Coral ndị mejupụtara Reef ndị ahụ tolitere na mmiri na-emighị emi n’akụkụ ụsọ oké osimiri.
Cretaceous ahụ mere ihe dị ka Afọ 145 ruo 65 nde. Ọ bụ oge akara akara Mesozoic na mmalite nke Ogechi. N'oge a enwere oke mkpochapu nke ndị dị ndụ nke ndị dinosaur na-apụ n'anya na 75% nke ihe niile invertebrates. Ihe ohuru ohuru na-amalite site na osisi ifuru, mammals na nnunu.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche banyere ihe kpatara mkpochapụ ahụ. Ozizi kachasị gbasatara bụ na mgbanwe nke ihu igwe, ikuku na ike ndọda na-ewere ọnọdụ n'oge a, agbakwunyere ya ọdịda nke nnukwu meteorite na mpaghara Yucatan. Mita a gbanwere ọnọdụ obibi ụwa nke ukwuu wee bute mkpochapu n'ihi enweghị mmegharị na ọnọdụ ọhụụ. N'ihi nke a, usoro mmalite nke ụwa lekwasịrị anya n'ịgbasawanye nnụnnụ na anụmanụ.
Site na ozi a ị ga-enwe ike ịmatakwu banyere Mesozoic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Mesozoic: ihe niile ị kwesiri ịma
Ihe na-atọ ụtọ, ihe na-atọ ụtọ maka nkọwa zuru oke na nke doro anya nke oge na oge ọ bụla, daalụ, daalụ nke ukwuu!
Zaghachi Mauro Neumann